Minyaka yonke, amakhompyutha ezingasho avele ezimpilweni zethu. Esikhathini sethu, hhayi nje kunoma yiliphi ihhovisi ifakwe eziningi PC, zenziwe LAN olulodwa. amakhompyutha oluningana kuyinsakavukela, hhayi kuphela emsebenzini kodwa nasekhaya - ngaphandle PC umile, imikhaya eminingi ukuthola laptops compact noma netbooks, ezisetshenziswa ngezinhloso ezehlukene. Futhi ngokuvamile kakhulu abanikazi lezi amadivaysi ufuna ukwazi kanjani ukwakha inethiwekhi phakathi kwamakhompyutha yakho.
Okokuqala nje, ake sibone ukuthi kungani kungase kudingeke ikhaya LAN? Uma ikhompyutha ehhovisi, yonke into ilula - phezu exchange ukusebenza amafayela idatha phakathi abasebenzi kakhulu inquma ijubane futhi umphumela umsebenzi izisebenzi eziningana ekhaya uxhumeke kwinethiwekhi olulodwa computer kungaba lula kakhulu ukuphila zabanikazi.
Okokuqala, inethiwekhi yendawo kuzokuvumela ukuze uthumele amafayela of yimuphi isayizi kusuka PC eyodwa kuya kwenye, futhi abasebenzisi ngeke kudingeke ukuba ngikulobele zona kudiski noma imidiya esikhiphekayo, bese ukuchitha isikhathi ukukopisha. Okwesibili, ngenxa inethiwekhi yendawo yonke imizi izokwazi ukubukela amabhayisikobho, ukulalela umculo zakho ozithandayo bese ufunda izincwadi kusuka kunoma iyiphi ikhompuyutha exhunywe kwi-"lokalke". Futhi okwesithathu, uma omunye inethiwekhi ekhaya lwamakhompyutha exhunywe kwi-Inthanethi, lesi siteshi uma ufuna ukwazi ukusebenzisa amakhompyutha kanye nabanye abanikazi, ukuthi yisisombululo elula kakhulu futhi engabizi.
Naphezu kweqiniso lokuthi sekuyisikhathi eside amakhompuyutha kwaba etholakala emizini eminingi, akubona bonke abasebenzisi bazi kanjani ukwakha inethiwekhi phakathi kwazo. Kodwa lokho akusho ngempela kubangele onguchwepheshe bese ukhokha imali. Yakha inethiwekhi ekhaya ngezandla zenu can cishe wonke abanolwazi PC umsebenzisi, futhi lesi sihloko sizokusiza ukuba nezinkinga kungenzeka sokumisa amakhompyutha lapho ukuxhuma "lokalke".
Okokuqala sidinga ukuhlola ukuthi zonke PC ukuba namakhadi inethiwekhi. Uma ikhompyutha yakho yathengwa isikhathi eside, idivayisi kungenzeka zingaveli, kodwa uma akusiyo eqolo futhi ungakwazi ukuthenga it in cishe njalo esitolo okukhethekile. Ukufuya laptop ezimweni eziningi, akukho okumele ukhathazeke ngakho - cishe yonke laptops yesimanje anemisila inethiwekhi amakhadi.
Khona-ke kufanele uhlole ukuthi inguqulo yesistimu yokusebenza kulawulwa amakhompyutha ofuna uhlangane ku kwenethiwekhi yasendaweni. Lokhu kungenxa yokuthi kwenethiwekhi, isibonelo, ama-PC amabili egijima Windows XP akuthathi kakhulu (okubaluleke ngempela ulandele imiyalo ku "Lungiselela kuxhumana kwenethiwekhi"). Ngesikhathi esifanayo, inethiwekhi phakathi i-Windows 7 ne-XP ukuze uthole umsebenzi ofanayo nzinyana. Lokhu kuzodinga izinyathelo ukwenza ezilula ezimbalwa, kodwa usithe "teapot" isinyathelo.
Okokuqala, hlola ukuthi kuyiqiniso exhunyiwe intambo (izibani kwi amakhadi inethiwekhi exhunywe amakhompyutha kufanele ziyavutha ukukhanya green), bese uhlala phansi ukuze ikhompyutha egijima 'eziyisikhombisa ". Vula "Inethiwekhi esilawula" (ungakuthola ku "Control Panel", okuyinto empandeni "Qala" imenyu) bese udala "iqembu ekhaya". Okulandelayo kufanele ukufinyelela amafolda namafayela kuleyo khompyutha avunyelwe, ukushintshe kube umbiko kuya 40-bit noma 56-bit ukubethela, njengoba i-Windows XP ayisekeli ezinye izinhlobo ukubethela. Khubaza iphasiwedi ukufinyelela jikelele bese ugcine izinguquko kwenziwe. Ngaphambi usethe inethiwekhi, ukuya computer egijima Windows XP, nasendleleni "Run" (itholakala ku "Qala"), faka igama computer ukuze "Eziyisikhombisa." Ngemva PC uthola "umakhelwane" yakhe, kunethiwekhi yasendaweni uzolunga ukuya!
Akufanele sibakhohlwe ukuthi ngaphambi kokudala inethiwekhi, ukhethe amafayela kwikhompyutha yakho namafolda lizokwabiwa kusuka kunethiwekhi yakho yasekhaya. Kungenjalo, abasebenzisi ngeke bakwazi ukusebenza kunethiwekhi, naphezu kweqiniso lokuthi "lokalku" azosethwa kwesokudla.
Fibre optic inthanethi - kuyini? Indlela kokuxhuma Inthanethi fiber-optic
"Ukufa track: Revival" - ukuqhutshekiselwa kubafanele ejwayelekile noma u- ukuthi imali ekhukhwini abalandeli?
Yini okufanele kucatshangelwe ngaphambi kokuba uqale ingxoxo nentombazane inthanethi